Shiinaha Samarium Fluoride SmF3 Soo-saar iyo Warshad | Liche
Fluorides saafi ah
Kaalshiyamka Fluoride CaF2
Kalibaaliyuum Fluoride KF
Qalabka Kobaca & Uumi-baxa
Silikoon Dioxide SiO2
Aluminium oksaydh Al2O3
Dioxide Titanium TiO2
Fluorides Dunida oo Dhif ah
Daawada loo yaqaan 'Praseodymium Fluoride PrF3'
Qalabka Dahaarka Lagu Buufiyo Plasma
Ujeeddo Gaara Qalabka Nadiifnimada Sare
Samarium Fluoride (SmF3), Purity≥99.9% CAS No. wax yar oo hygroscopic ah. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa reagents-ka shaybaarka, fiilooyinka fiilooyinka indhaha, qalabka laser-ka, qalabka fluorpar-emitting, fiber optical, qalabka daahan indhaha, iyo qalabka elektaroonigga ah. Samarium Fluoride waxay leedahay adeegsi khaas ah oo ku jira galaaska, fosfoorasyada, laserska, iyo t ...
Samarium Fluoride (SmF3), Nadiif ≥99.9%
CAS Maya. 13765-24-7
Miisaanka Molecular: 207.35
Barta dhalaalida: 1306 ° C
Samarium (III) Fluoride (SmF3), ama samarium trifluoride, waa iskudhaf ionic crystalline ionic ah oo waxyar hygroscopic ah. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa reagents-ka shaybaarka, fiilooyinka fiilooyinka indhaha, qalabka laser-ka, qalabka fluorpar-emitting, fiber optical, qalabka daahan indhaha, iyo qalabka elektaroonigga ah.
Samarium Fluoride waxay leedahay adeegsiyo gaar ah oo kujira galaaska, fosfooraska, laserska, iyo aaladaha heerkulka korantada. Samarium-doped Calcium Fluoride crystals waxaa loo isticmaalay inuu yahay dhexdhexaad dhexdhexaad ah mid ka mid ah laser-ka ugu horreeya ee adag ee gobolka loo qaabeeyey lana dhisay. Mid ka mid ah codsiyada ugu muhiimsan ee Samarium. Tusaale ahaan, magnets cobalt, oo leh magac magac ah SmCo5 ama Sm2Co17. Magnet-yadan waxaa laga helaa matoorro yaryar, sameecado-dhegaha, iyo soo-qaadeyaasha heer-sare ee birlabta ee gitaarka iyo qalabka muusikada ee la xiriira.
Samarium (III) Fluoride waxaa badanaa loo isticmaalaa sida:
- reagent shaybaar
- doping fiber optical, qalabka daahan indhaha
- qalabka laysarka
- qalabka fluorpar-ka soo saara iftiinka
- qalabka elektarooniga ah
Hore: Neodymium Fluoride NdF3
Xiga: Ytterbium Fluoride YbF3
Cinwaankaaga: Room 1705, Tianyuan Business Building, No.3 Yuejin Road, Degmada Chang'an, Shijiazhuang, Hebei, Shiinaha, 050000
Telefoonka: + 86-15233008891